Chile: Mpianatra Mitoraka Rano Ny Tavan’ny Minisitry Ny Fanabeazana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2017 7:05 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Português, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Mampiseho ny fihaonambe nandritra ny Fandraisana Anjara tamin'ny Dinidinika napetraky ny Minisitry ny Fampianarana ny lahatsary izay navoakan'ilay mpisera profemetropolitano. Teo amin'ny 2:02 ora, tao anatin'ny hiakiaka manohitra ny LGE, mpianatra 14 taona manao palitao mena no hita mangataka valinteny mikasika ireo mpiara-mianatra aminy nofonjaina, ary mitaky fanazavana manoloana ny daroka nahazo azy. Nanaraka ny Minisitra Mónica Jiménez niakatra teny an-tsehatra izy avy eo, nisisika niresaka taminy saingy nosakanan'ny manampahefam-panjakana, ary tamin'izany no nangalany siny feno rano sy nitorahany izany teo eo amin'ny tavan'ny Minisitra.
Manohitra ny Volavolan-dalàna vaovao momba ny Fampianarana ireo mpianatra Shiliana, araka ny filazan'i Erwin, mpiara-miasa ao amin'ny bilaogy Latin Americanist (Ley General de Educación) izay efa nanapa-kevitra tao amin'ny antenimieran-doholona, indrindra teo amin'ny sehatry ny torolalana momba ny fampianarana tsy mitady tombontsoa ara-bola sy ny fahafahana mifantina mpianatra mifototra amin'ny saranga ara-tsosialy sy ara-toekarena sy ny fianarana vita ahafahana misoratra anarana any an-tsekoly, anisan'ireo fitarainana tsy noraharahian'ny governemanta tamin'ny fifanekena nosoratana nandritra ny fihetsiketsehana taona 2007 izany. Tao anatin'izany fihetsiketsehana goavana izany, ny fibodoana sekoly sy ny fanakanan-dalana manerana ny firenena, mpianatra sy mpampianatra an-jatony no nosazian'ny polisy ary nogadraina ny sasany, araka ny hita ao amin'ity mashup tamin'ny sary amin'ny fahitalavitra mitatitra ny zava-nitranga ity.
Nanambara ny minisitra fa ny fanipazana rano teo amin'ny tavany dia ohatra iray amin'ny fomban'ny olona tsy manana tohan-kevitra hanaporofoana ny hevitr'izy ireo ka lasa mampiasa herisetra.